Gigi Hadid ရဲ့ တစ်နေ့တာ စားသောက်တဲ့ပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း - For her Myanmar
GiGi Hadid လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သိပ်လှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း၊ ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိပြီး သိပ်လှတဲ့မျက်နှာ၊ ကမ္ဘာကျော် ဗစ်တိုးရီးယားစီးကရက်မော်ဒယ်လ်လို့ ခေါင်းထဲမှာ အချက်အလက်တွေက တန်းစီပြီးထွက်လာမှာပဲနော်… ဒီလို အစစအရာရာ ပြည့်စုံနေတဲ့ အလှနတ်မိမယ်တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် နောက်ကွယ်မှာ အားထုတ်မှုတွေအများကြီး လိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ အထူးတလည် ပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူး ထင်ပါရဲ့ ယောင်းတို့ရေ… GiGi လို လှချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းယောင်းတွေကို GiGi ရဲ့ တစ်နေ့တာ အစားအသောက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံကို ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ကဲ ဆက်ကြည့်ရအောင်နော်…
GiGi ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ ဟိုးငယ်ဘဝကတည်းက အချိုးကျပြီးလှပခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ(မ) ဟာအားကစားအရမ်းလိုက်စားသူဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက မြင်းစီးအားကစားကို မှန်မှန်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ မော်ဒယ်လ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ လက်ဝှေ့နေ့တိုင်းထိုးပါတယ်တဲ့။ နေ့စဉ်ပုံမှန်အားကစားမလုပ်ခင် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ သဲအိတ်ကို ခပ်နာနာထိုးလေ့ရှိပါတယ်။
GiGi ဟာ တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေထက်စာရင် သူ(မ) ရဲ့ ဗိုက်သားကို ဦးစားပေးပြီး လေ့ကျင့်သူပါ။ ၁၀မိနစ်စာ လက်ဝှေ့ထိုးပြီးတာနဲ့ အိပ်ထမတင် အကြိမ် ၄၀ (၃) ကြော့၊ စက်ဘီးနင်းတဲ့ပုံစံ အိပ်ထမတင် အကြိမ် ၄၀ (၃) ကြော့၊ နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ ၁ မိနစ်စာ plank ထောက်တာကို နေ့တိုင်းထည့်ပြီး လေ့ကျင့်ပါတယ်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်ကို သိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
တခြား ပုခုံးနဲ့ လက်မောင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေအတွက်ကတော့ လက်ဝှေ့ကိုပဲ ဦးစားပေးထိုးရင်း လေ့ကျင့်ပါတယ်တဲ့။ အောက်ပိုင်းကိုတော့ တင်ထိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း (squad) အကြိမ် ၄၀ (၃) ကြော့၊ ဆူမိုတင်ထိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်း (sumo squad) အကြိမ် ၄၀ (၃) ကြော့၊ ခြေကန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ အကြိမ် ၄၀ (၃) ကြော့ဆော့ပါတယ်တဲ့။ သူ(မ) ရဲ့ထရိန်နာ အတင်းတုပ်ပုံအရဆိုရင် သူ(မ) က အခန်းထဲ အောင်းပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်နေရတာထက်စာရင် အပြင်မှာ လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရတာ ပိုကြိုက်တတ်သူပါတဲ့လေ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စေချင် 😛
Related Article >>> အင်စတာဂရမ် မှာ ပုံတစ်ခါတင်တိုင်း ဒေါ်လာသိန်းချီရတဲ့နာမည်ကျော်(၉) ဦး
GiGi ရဲ့နောက်လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကတော့ အစားအသောက်ကို သင့်တင့်မျှတပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်အောင် သေချာတွက်ချက်ပြီး စားသောက်တာပါပဲ။ သူ(မ)ဟာ လေ့ကျင့်ခန်းထက်စာရင် အစားအသောက်ကို ပိုပြီး သတိထားစားသောက်ဖို့ ပြောတတ်သူပါ။ မနက်စာကိုတော့ ကြိတ်ခြေထားတဲ့ ကြက်ဥပြုတ်၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်နဲ့ ပေါင်မုန့်မီးကင်၊ လိမ္မော်ဖျော်ရည်နဲ့ ကော်ဖီကို အများကြီးစားသူပါ။
နေ့လယ်စာကိုတော့ သူ(မ) ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အရွက်သုပ် တစ်မျိုးမျိုး၊ အသီးဖျော်ရည်ကို စားသောက်ပြီး ညဘက်မှာတော့ ဆူရှီနဲ့ ဖျော်ရည်ကို စားတတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူ(မ) ဟာ သူ(မ) စားသောက်မယ့်အစားအသောက်တွေကို ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တတ်သူပါ။ နောက်ပြီး ရေခဲမုန့်အတွက်လည်း တစ်နေရာစာ ချန်တတ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပုံစံကို နေ့တိုင်းစားတာမဟုတ်ပါဘူး။
Cheat day ဆိုတဲ့သူစားချင်တာ သောက်ချင်တာတွေကို တမုန်းစားတဲ့ နေ့လည်းရှိပါတယ်။ ချိစ်ဘာဂါကြိုက်သူမို့ Cheat Day ဆိုရင် ချိစ်ဘာဂါနဲ့ အာလူးချောင်းကြော်တွေကို အသားကုန်ထိုင်စားနေတတ်တဲ့ သူ(မ) ကို နယူးယောက်မြို့ရဲ့ ဘာဂါဆိုင်မှာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ် 😛 နောက်ပြီး အသီးဖျော်ရည်နဲ့ ရေကိုလည်း သတိရရင်ရသလို အများကြီးသောက်ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် စိုစိုပြည်ပြည်နဲ့ လှနေတာကိုး။
ရှင်တို့ အစာအငတ်ခံနေတဲ့အချိန် ကျွန်မကတော့ ချိစ်ဘာဂါနဲ့ ငြိမ့်နေတာပါနော် 😛
Related Article >>>> Wonder Woman ဇာတ်ကောင်အတွက် Gal Gadot ဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲ
ကဲ ဝိတ်ကျဖို့အတွက် တစ်နေ့လုံး ရေပဲသောက်ပြီး တခြားဘာမှမစားဘူးဆိုတဲ့ မမတွေ ဘယ့်နှယ်ရှိစ? ဝိတ်ချတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မစားမသောက် နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး မစားဖို့၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းပြီး နောက်ကလေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်း ကူဖို့ပြောတာပါ။ အချိုတွေ၊ ဟော့ပေါ့နဲ့ မာလာရှမ်းကောတွေကို ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ စားချင်သလောက်စားနေသရွေ့တော့ အဟင်းနော်.. အဟင်း…
ကိုယ်ကမော်ဒယ်မှမဟုတ်တာ ဝလည်းလှတာပဲ ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာတဲ့အထိဆိုရင်တော့ သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ သင့်ပါတယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါရစေ ယောင်းတို့ရေ…
References: Fashion Lady, Popsugar
အလှနတျမိမယျရဲ့ တဈနစေ့ာပလနျ ဒီဇိုငျးကာလာဘာညာ အနအေထားဟာဆိုရငျတော့ဖွငျ့….
GiGi Hadid လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ သိပျလှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျ ကောကျကွောငျး၊ ဆှဲဆောငျမှုအပွညျ့ရှိပွီး သိပျလှတဲ့မကျြနှာ၊ ကမ်ဘာကြျော ဗဈတိုးရီးယားစီးကရကျမျောဒယျလျလို့ ခေါငျးထဲမှာ အခကျြအလကျတှကေ တနျးစီပွီးထှကျလာမှာပဲနျော… ဒီလို အစစအရာရာ ပွညျ့စုံနတေဲ့ အလှနတျမိမယျတဈယောကျ ဖွဈလာဖို့အတှကျ နောကျကှယျမှာ အားထုတျမှုတှအေမြားကွီး လိုကျနတေယျဆိုတာကိုတော့ အထူးတလညျ ပွောနစေရာမလိုတော့ပါဘူး ထငျပါရဲ့ ယောငျးတို့ရေ… GiGi လို လှခငျြပါတယျဆိုတဲ့ ယောငျးယောငျးတှကေို GiGi ရဲ့ တဈနတေ့ာ အစားအသောကျနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပုံစံကို ဒီဆောငျးပါးလေးထဲမှာ ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ ကဲ ဆကျကွညျ့ရအောငျနျော…
GiGi ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကတော့ ဟိုးငယျဘဝကတညျးက အခြိုးကပြွီးလှပခဲ့ပါတယျတဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ(မ) ဟာအားကစားအရမျးလိုကျစားသူဖွဈပွီး ငယျစဉျကတညျးက မွငျးစီးအားကစားကို မှနျမှနျလုပျခဲ့တာကွောငျ့ပါ။ မျောဒယျလျဖွဈလာတဲ့အခြိနျမှာတော့ လကျဝှနေ့တေို့ငျးထိုးပါတယျတဲ့။ နစေ့ဉျပုံမှနျအားကစားမလုပျခငျ သှေးပူလကေ့ငျြ့ခနျးအနနေဲ့ သဲအိတျကို ခပျနာနာထိုးလရှေိ့ပါတယျ။
GiGi ဟာ တခွားခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှထေကျစာရငျ သူ(မ) ရဲ့ ဗိုကျသားကို ဦးစားပေးပွီး လကေ့ငျြ့သူပါ။ ၁၀မိနဈစာ လကျဝှထေို့းပွီးတာနဲ့ အိပျထမတငျ အကွိမျ ၄၀ (၃) ကွော့၊ စကျဘီးနငျးတဲ့ပုံစံ အိပျထမတငျ အကွိမျ ၄၀ (၃) ကွော့၊ နောကျဆုံးပိတျအနနေဲ့ ၁ မိနဈစာ plank ထောကျတာကို နတေို့ငျးထညျ့ပွီး လကေ့ငျြ့ပါတယျ။
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျကို သိလိုပါက >> http://bit.ly/2WK7oFQ
တခွား ပုခုံးနဲ့ လကျမောငျး လကေ့ငျြ့ခနျးတှအေတှကျကတော့ လကျဝှကေို့ပဲ ဦးစားပေးထိုးရငျး လကေ့ငျြ့ပါတယျတဲ့။ အောကျပိုငျးကိုတော့ တငျထိုငျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး (squad) အကွိမျ ၄၀ (၃) ကွော့၊ ဆူမိုတငျထိုငျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျး (sumo squad) အကွိမျ ၄၀ (၃) ကွော့၊ ခွကေနျတဲ့လကေ့ငျြ့ခနျးကိုတော့ အကွိမျ ၄၀ (၃) ကွော့ဆော့ပါတယျတဲ့။ သူ(မ) ရဲ့ထရိနျနာ အတငျးတုပျပုံအရဆိုရငျ သူ(မ) က အခနျးထဲ အောငျးပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးတှေ လုပျနရေတာထကျစာရငျ အပွငျမှာ လှုပျရှားမှုတှလေုပျရတာ ပိုကွိုကျတတျသူပါတဲ့လေ။
ပြျောပြျောရှငျရှငျလေး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျစခေငျြ 😛
Related Article >>> အငျစတာဂရမျ မှာ ပုံတဈခါတငျတိုငျး ဒျေါလာသိနျးခြီရတဲ့နာမညျကြျော(၉) ဦး
GiGi ရဲ့နောကျလြှို့ဝှကျခကျြတဈခုကတော့ အစားအသောကျကို သငျ့တငျ့မြှတပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျအောငျ သခြောတှကျခကျြပွီး စားသောကျတာပါပဲ။ သူ(မ)ဟာ လကေ့ငျြ့ခနျးထကျစာရငျ အစားအသောကျကို ပိုပွီး သတိထားစားသောကျဖို့ ပွောတတျသူပါ။ မနကျစာကိုတော့ ကွိတျခွထေားတဲ့ ကွကျဥပွုတျ၊ ဝကျပေါငျခွောကျနဲ့ ပေါငျမုနျ့မီးကငျ၊ လိမ်မျောဖြျောရညျနဲ့ ကျောဖီကို အမြားကွီးစားသူပါ။
နလေ့ယျစာကိုတော့ သူ(မ) ကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အရှကျသုပျ တဈမြိုးမြိုး၊ အသီးဖြျောရညျကို စားသောကျပွီး ညဘကျမှာတော့ ဆူရှီနဲ့ ဖြျောရညျကို စားတတျပါတယျ။ နောကျပွီး သူ(မ) ဟာ သူ(မ) စားသောကျမယျ့အစားအသောကျတှကေို ကိုယျတိုငျ ပွငျဆငျခကျြပွုတျတတျသူပါ။ နောကျပွီး ရခေဲမုနျ့အတှကျလညျး တဈနရောစာ ခနျြတတျပါသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုပုံစံကို နတေို့ငျးစားတာမဟုတျပါဘူး။
Cheat day ဆိုတဲ့သူစားခငျြတာ သောကျခငျြတာတှကေို တမုနျးစားတဲ့ နလေ့ညျးရှိပါတယျ။ ခြိဈဘာဂါကွိုကျသူမို့ Cheat Day ဆိုရငျ ခြိဈဘာဂါနဲ့ အာလူးခြောငျးကွျောတှကေို အသားကုနျထိုငျစားနတေတျတဲ့ သူ(မ) ကို နယူးယောကျမွို့ရဲ့ ဘာဂါဆိုငျမှာ တှရေ့ပါလိမျ့မယျ 😛 နောကျပွီး အသီးဖြျောရညျနဲ့ ရကေိုလညျး သတိရရငျရသလို အမြားကွီးသောကျပါတယျတဲ့။ ဒါကွောငျ့ စိုစိုပွညျပွညျနဲ့ လှနတောကိုး။
ရှငျတို့ အစာအငတျခံနတေဲ့အခြိနျ ကြှနျမကတော့ ခြိဈဘာဂါနဲ့ ငွိမျ့နတောပါနျော 😛
Related Article >>>> Wonder Woman ဇာတျကောငျအတှကျ Gal Gadot ဘာတှလေုပျခဲ့ရလဲ
ကဲ ဝိတျကဖြို့အတှကျ တဈနလေုံ့း ရပေဲသောကျပွီး တခွားဘာမှမစားဘူးဆိုတဲ့ မမတှေ ဘယျ့နှယျရှိစ? ဝိတျခတြယျဆိုတာ လုံးဝ မစားမသောကျ နတောမြိုးမဟုတျဘဲ စိတျအလိုလိုကျပွီး မစားဖို့၊ ကိုယျ့စိတျကိုယျ ထိနျးသိမျးပွီး နောကျကလကေ့ငျြ့ခနျးလေးလညျး ကူဖို့ပွောတာပါ။ အခြိုတှေ၊ ဟော့ပေါ့နဲ့ မာလာရှမျးကောတှကေို ကိုယျ့စိတျတိုငျးကြ စားခငျြသလောကျစားနသေရှတေ့ော့ အဟငျးနျော.. အဟငျး…
ကိုယျကမျောဒယျမှမဟုတျတာ ဝလညျးလှတာပဲ ဆိုပမေဲ့ ကိုယျ့ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျလာတဲ့အထိဆိုရငျတော့ သတိထားဆငျခွငျဖို့ သငျ့ပါတယျလို့ သတိပေးလိုကျပါရစေ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Beauty, Clebrity, Fitness, Food, GiGi Hadid, Plan, workout
Hnin Ei Oo September 3, 2018